Eme Nchikota, Nkuchi na Mwepu | MeiXin ahịhịa
Gbado anya na igwe eji ngwa ọgbụgba arụmọrụ dị elu kemgbe 2003.
.Lọ > Ngwaahịa
Igwe eji egwe osisi na -eme ka ike hu nke a.
Professional MX200 gbagọrọ agbagọ ahịhịa Ndinam igwe soplaya
Professional MX200 gbagọrọ agbagọ ahịhịa Ndinam igwe emepụta.MX200 gbagọrọ agbagọ ahịhịa Ndinam igwe nwere ọgaranya ahụmahụ na ọrụ nke. Anyị nwere ọkọlọtọ mmepụta usoro na-atọkwa mmepụta technology. Anyị na-ahụ na ngwaahịa anyị dị mma, nwee ntụkwasị obi ma dị mma.Ngwaahịa a abụrụla ihe ụlọ ọrụ na-elekwasị anya wee nabata atụmanya ngwa ngwa na-enwu gbaa. MX200 kpara ahịhịa Ndinam igweEnweela ule dị iche iche maka MEIXIN. Ule ndị a na-etinye ule mbibi ihe mbibi, nyocha cabling, nnwale electromagnetic (EMC), na ule arụmọrụ.
3 Axis Single Hockey ahịhịa Ime igwe
Anyị ga-ahọrọ ma ọ bụ hazie igwe eji eme ahịhịa dị iche iche maka gị dịka ụdị ngwaahịa gị si dị. Anyị arụpụtara ụlọ 2-5axis na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwe eji eme ihe maka afọ 17 +.
China 4 Axis Single Tufting Machine emepụta-MEIXIN
Anyị ga-ahọrọ ma ọ bụ hazie igwe eji eme ahịhịa dị iche iche maka gị dịka ụdị ngwaahịa gị si dị. Anyị arụpụtala ụlọ 2-5axis na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na igwe eji eme ihe maka afọ 17.MEIXIN China 4 Axis Single Tufting Machine emepụta-MEIXIN
China Big diski ahịhịa Ndinam igwe 5Axis emepụta-MEIXIN
China Big diski ahịhịa Ndinam igwe 5Axis emepụta-MEIXINA na-arụ MEIXIN n'okpuru usoro nlekọta nke oge a.5Axis 1drilling 1 tufting igwe. Filament ogologo 300mm.
Igwe Ọkachamara Ọkachamara Ọkachasị Brush na ndị na-emepụta Brush Roll
$ $> Ọkachamara ahịhịa ahịhịa na ahịhịa Emeputa Emeputa
MX210 Manual Toilet Brush Trimming Machine FactoryPrice-. MX210 Manual Toilet Brush Trimming Machine ，，，，、、。 Ejiri $ ‹$$> MEIXIN jiri ndi di ocha kee ha. Havingnwere fan dị n’elu ma ọ bụ n’akụkụ bụ ihe a na-ahụkarị n’ihi na ụdị a na - egbochi ụmụ irighiri ihe ndị metụtara ikpo ọkụ. MX210 Manual Toilet Brush Trimming Machine Enwere ike iji MEIXIN nweta ogo nke ya.
Ndị na-emepụta China MX211 Manual Broom Trimming Machine
China MX211 Manual Broom Trimming Machine emeputa-. MX211 Manual Broom Trimming Machine MEIXIN bụ nke arụpụtara ọfụma site na ijikọta ma usoro ọgbara ọhụrụ na ihe kacha mma. Ndị nrụpụta ọrụ na-arụ ọrụ maka JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED bụ onye ama ama n'ụwa niile. MX211 Manual Broom Trimming Machine Usoro mmepụta nke MEIXIN na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ. Ha bụ nkwenye echiche, usoro nhazi, usoro nlele, ịkpụcha usoro, ịkwa akwa, ịsa ahụ, na nyocha ọrụ.
MX212 Automatic Broom Trimming Na Igwe Ọdụdọ Nwere Igwe Ọkụ
MX212 Automatic Broom Trimming Na Igwe Ọdụdọ Nwere Igwe Ọkụ. MX212 Automatic Broom Trimming na flaggable Machine Hot na-ere na. Mgbe ndị ọrụ ejirila ihe odide ma ọ bụ esere ha mepụta, ngwaahịa a na-enye ohere ịnweta kọmputa Windows na Mac iji chekwaa ọrụ ha. MX212 Automatic aziza trimming Ma Flaggable Machine Ndị ọrụ nwere nkà na ọtụtụ akụrụngwa na-ekwe nkwa ngwaahịa a.
HighQuality WhMX 001 Pneunatic Filament Cutting Machine N'ogbe
HighQuality WhMX 001 Pneunatic Filament Cutting Machine N'ogbe-. WhMX 001 Pneunatic Filament Cut Cut Machine Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ n'ime nwayọ na enweghị ụda mgbasu iwe na ụda mkpọtụ dị ala mgbe ejirichara ogologo oge, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịnọ na gburugburu ebe dị jụụ. $mepụta ihe dị ka $ $> enyerela aka JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED merie ahịa. WhMX 001 Pneunatic Filament Cut Cut Machine ，，、、，，，。
Meixin Corporation dị
JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MAKA MACHINE AKCTKỌ, Kemgbe 2003, ụlọ ọrụ anyị na - arụpụta ụlọ ọrụ 2-5axis nke ụlọ ọrụ na ahịhịa ọrụ na broom, igwe na-akụ na igwe na-egbu egbu, igwe na-akụ pneumatic. O jiri ya mepụta ụdị brushes dị iche iche. Dị ka, brushes mposi, brooms, hockey ahịhịa, ahịhịa ntutu, kalama ahịhịa ọ bụla nke brushes. Maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka: brọshọ ahịhịa, ahịhịa diski maka ụzọ, na ụdị brushes ndị ọzọ.
Elu igwe dị elu 2 Axis Brush Machine
Anyị ga-ahọrọ ma ọ bụ hazie igwe eji eme ahịhịa dị iche iche maka gị dịka ụdị ngwaahịa gị dị. Anyị arụpụtala ụlọ ụlọ 2-5axis na ahịhịa na ụlọ ọrụ na broom maka afọ 17+.
Ngosipụta Meixin Na-eme Mkpogharị
Anyị arụpụtala ụdị ụlọ dị iche iche na brushes na brooms, ndị ụlọ gụnyere brushes, brooms, hrushes hockey, ntutu isi, na bruss kalama, na ndị mepere emepe gụnyere brọsh ahịhịa, ahịhịa diski maka okporo ụzọ na azachasị brooms maka okporo ụzọ.